LG dia nanao patanty finday misy fakantsary miisa 16 | Androidsis
Ny tsena Android dia nivoatra be tamin'ny resaka isan'ny fakantsary. Ny fakan-tsary fakantsary dia nanjary fahita ankehitriny. Na dia efa misy marika vitsivitsy aza miloka amin'ny fakan-tsary telo na koa avy amin'i fakantsary efatra aoriana. Saingy toa kely amin'ny LG io. Farafaharatsiny raha miantehitra amin'ny patanty vaovao izay efa nisoratra anarana tany Etazonia ny orinasa koreana tato ho ato.
Ao anatin'izany no ahitantsika ny hevitry ny telefaona vaovao izay tian'i LG atomboka amin'ny tsena. Finday iray izay hisongadina amin'ny isan'ny fakantsary ao anatiny. Araka ny mahita fakantsary 16 aoriana izahay. Eny, mamaky tsara ianao.
Miaraka amin'ilay patanty nosoratan'ny orinasa, dia efa hitanay ireo sary na hevitra voalohany an-tariby ireo. Ao ambadik'io mahita sensor 16 izahay. Tsy misy isalasalana, filokana mampidi-doza amin'ny LG, na dia mety hidika ho revolisiona amin'ny lafiny sary amin'ny Android aza izany.
Ny hevitry ny orinasa dia hoe afaka mampiasa an'ity telefaona ity ianao maka sary amin'ny zoro rehetra, fa tsy mihetsika ny telefaoninao. Ny sary dia azo alaina mivantana amin'ny zoro isan-karazany rehefa maka sary mahazatra miaraka amin'ny fakantsary. Ity dia zavatra azo atao noho ny endrika sy ny fametrahana ireo sensor ireo. Zavatra hitantsika amin'ny sary etsy ambony.
Ho fanampin'izay, ity haitao izay mivoatra LG ity, hamela anao hanao scan zavatra haingana kokoa ary miaraka amin'ny famaritana lehibe kokoa. Tsy misy fisalasalana fa zavatra azo ampiasaina betsaka izy io. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia tsy misy pitsopitsony momba ny teknolojia na ny fiasan'io.
Izy io dia patanty, lna midika izany fa mety tsy hanafaka ity fitaovana ity i LG mankany an-tsena. Tsy maintsy miandry isika vao hahalala hoe inona no ataon'ny orinasa amin'ireo hevitra ireo. Na dia azo antoka aza fa maro amintsika no te hahalala ny zavatra azon'ity finday atao ity raha ny tena izy. Ahoana ny hevitrao momba ity patanty ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » Finday misy fakan-tsary 16? LG dia nanao patanty iray fotsiny